IMayo Glamping-Indlwana yaseCladdagh
Ngaba wakha wazibuza ukuba kuya kuba njani ukuhlala njenge-hobbit phantsi komhlaba? Indlu yethu encinci, egqunywe ngumhlaba intle kwaye iyathosa, ilala abantu aba-2 (ibhedi ephindwe kabini).
Siphumle kwisauna yethu eyenziwe ngamaplanga kunye ne-tub eshushu*, pheka ipizza okanye utshise i-BBQ kwindawo yethu yekhitshi engaphandle kwaye uthobe iimarshmallows kwiindawo zethu zomlilo. Kukho ikhitshi elidityanelweyo, indlu yangasese kunye neeyunithi zokuhlambela kwindawo.
** Ibhafu eshushu ifumaneka ngesicelo, iindawo zokubeka iyure ezi-1 zifumaneka ukusuka ngentsimbi yesi-5 ukuya ezinzulwini zobusuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castlebar, Co.